Fanampiana ara-pahasalamana amin'ny ati-doha: Atsaharo izao ny Dementia?
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fanampiana ara-pahasalamana amin'ny ati-doha: Atsaharo izao ny Dementia?
Araka ny voalazan'ny Coherent Market Insights, ny tsenan'ny fanampin-tsakafo ara-pahasalamana eran-tany dia tombanana ho 14,639.5 Mn raha ny vidiny amin'ny faran'ny taona 2028.
Ny ginkgo biloba sy ny coenzyme Q10 dia samy malaza, na dia misy kafeinina aza izy ireo, izay mety hanimba ny fiasan'ny atidoha. Ny fampiasana ireo fanampin-tsakafo isan'andro ireo dia afaka manampy amin'ny fisorohana ny dementia, manatsara ny toe-po ary ny fitadidiana. Misy fanampin-tsakafo maro samihafa izay afaka manampy amin'ny fanatsarana ny fiasan'ny atidoha. Ny sasany amin'ireo malaza indrindra dia vitaminina sy mineraly, izay mahasoa ny atidoha. Ireo izay manana olana ara-tsaina dia tokony hisoroka ny fihinanana vitamin E, izay antioxidant mahery. Na dia mahasoa amin'ny fahasalamana ankapobeny aza ireo fanampin-tsakafo ireo, dia tsy mahomby amin'ny fitsaboana na fisorohana ny dementia.
1. Ny fihanaky ny aretina ara-tsaina dia antenaina hitarika ny fitomboan'ny tsenan'ny fanampin-tsakafo ara-pahasalamana manerantany mandritra ny vanim-potoana misy ny vinavina.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny isan'ny geriatria dia nitombo ny fihanaky ny aretina ara-tsaina isan-karazany toa ny Alzheimer, ny fahaketrahana ary ny tebiteby. Araka ny filazan'ny Fikambanana Alzheimer, tamin'ny taona 2021, manodidina ny 6.2 tapitrisa ny olona any Etazonia izay 65 taona no ho miakatra no miaina miaraka amin'ny dementia Alzheimer. Araka ny tatitry ny World Economic Forum (WEF), 2019, manodidina ny 275 tapitrisa ny olona eran-tany no mijaly noho ny aretin-tebiteby, ka ny 170 tapitrisa amin'ireo dia vehivavy mijaly ary ny lehilahy mijaly dia mahatratra 105 tapitrisa. Ankoatr'izay, araka ny filazan'ny Association Anxiety and Depression of America (ADAA), ny fikorontanan'ny tebiteby no aretina ara-tsaina mahazatra indrindra any Etazonia, izay misy fiantraikany amin'ny olon-dehibe 40 tapitrisa ao amin'ny firenena. Ny fanampin-tsakafo ho an'ny ati-doha dia afaka manampy amin'ny famongorana ny homocysteine, ny haavony avo dia mifandray amin'ny risika lehibe kokoa amin'ny dementia sy ny aretin'i Alzheimer.
2. Ny fampitomboana ny fahatsiarovan-tena eo amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny momba ny fahasalamana dia antenaina hanosika ny fitomboan'ny tsenan'ny fahasalaman'ny atidoha eran-tany mandritra ny vanim-potoana vinavina.
Ny vahoaka amin'ny ankapobeny dia nanjary nahafantatra bebe kokoa momba ny fanampin-tsakafo ara-pahasalamana sy ny tombony azo avy aminy. Mazoto mitady vokatra toy izany ny mpanjifa, mba hitazomana ny fomba fiaina ara-pahasalamana sy hisorohana ny firongatry ny aretina ara-tsaina isan-karazany. Miaraka amin'ny fitomboan'ny hetsika fampiroboroboana ataon'ireo orinasa lehibe, ny fangatahana fanampin-tsakafo ho an'ny fahasalaman'ny atidoha dia antenaina hiakatra tsy ho ela. Ankoatr'izay, ny fitomboan'ny fidiram-bola azo ampiasaina sy ny fitomboan'ny tanàn-dehibe any amin'ireo toekarena vao misondrotra, dia mety hitombo atsy ho atsy ny fampiasana fanampin-tsakafo toy izany.
1. Ny fandefasana vokatra vaovao avy amin'ireo mpilalao fototra dia afaka manome tombony amin'ny fitomboana
Ireo mpilalao fototra dia mifantoka amin'ny hetsika fikarohana sy fampandrosoana, mba hamoahana vokatra vaovao. Ohatra, tamin'ny Jolay 2020, ny Elysium Health dia namoaka fanampin-tsakafo vaovao momba ny fahasalaman'ny ati-doha Matter, tsiroaroa amin'ny vitaminina B avo lenta misy omega-3 novolavolaina manokana avy amin'ny menaka trondro.
2. Ny fampiasana paikady tsy ara-organika ataon'ireo mpilalao amin'ny tsena dia afaka manome fahafaha-manao fandraharahana lehibe ato ho ato
Ireo mpilalao tsena lehibe dia mandray anjara amin'ny paikady tsy ara-organika isan-karazany toy ny fiaraha-miasa sy fiaraha-miasa, mba hanatsarana ny fisian'ny tsena sy hahazoana tombony amin'ny fifaninanana. Ohatra, tamin'ny martsa 2021, i Neuriva dia niara-niasa tamin'i Mayim Bialik mba hanabe sy hanome hery ny mpanjifa amin'ny fahasalaman'ny atidoha.
1. Ny fanampin-tsakafo Fanamafisana ny fitadidiana dia mitohy amin'ny fangatahana lehibe
Amin'ireo fampiharana, ny fanatsarana ny fitadidiana dia iray amin'ireo sokajy lehibe indrindra amin'ny fanampin-tsakafo ara-pahasalamana. Ny fitomboan'ny ahiahy momba ny dementia eo amin'ny olona geriatric dia nampitombo ny fangatahana vokatra manatsara fahatsiarovana manerana an'izao tontolo izao. Araka ny filazan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO), tamin'ny taona 2021 dia manodidina ny 55 tapitrisa ny olona voan'ny dementia manerana an'izao tontolo izao ary manodidina ny 10 tapitrisa ny tranga isan-taona. Ny sasany amin'ireo vokatra fampahatsiarovana mahazatra indrindra eny an-tsena dia ny dite maitso, omega-3, fakany ginseng, turmeric ary bacopa.
2. Amerika Avaratra Trends
Amin'ireo faritra, i Amerika Avaratra dia antenaina hahita fitomboana lehibe amin'ny tsenan'ny fanampin-tsakafo ara-pahasalamana manerantany mandritra ny vanim-potoana misy ny vinavina. Izany dia noho ny fitomboan'ny isan'ny geriatrika sy ny fihanaky ny fahasembanana ara-tsaina manerana ny faritra. Araka ny filazan'ny Association Anxiety and Depression of America (ADAA), ny fikorontanan'ny tebiteby no aretina ara-tsaina mahazatra indrindra any Etazonia, izay misy fiantraikany amin'ny olon-dehibe 40 tapitrisa ao amin'ny firenena. Ankoatr'izay, ny fisian'ny fotodrafitrasa ara-pahasalamana matanjaka dia antenaina hanamafy ny fitomboan'ny tsenam-paritra ato ho ato.
Ny orinasa lehibe tafiditra amin'ny tsenan'ny fanampin-tsakafo ara-pahasalamana manerantany dia AlternaScript, LLC, Accelerated Intelligence Inc., Liquid Health, Inc., HVMN Inc., Natural Factors Nutritional Products Ltd., KeyView Labs, Inc., Onnit Labs, LLC, Purelife Bioscience Co., Ltd., Quincy Bioscience, Cerebral Success, Amway, Puori, Ocean Health, ary Schiff.
Ohatra, tamin'ny Aprily 2021, Unilever plc, orinasan'ny mpanjifa any UK, dia nahazo Onnit, orinasa fanampin-tsakafo ara-pahasalamana any Etazonia, izay malaza amin'ny vokatra fanampin'ny atidoha Alpha Brain ho fitadidiana tsara kokoa, fifantohana ary fikarakarana ara-tsaina.
• Araka ny karazana vokatra:
• Herbal Extracts: Ginseng, Ginkgo Biloba, Curcumin, Lions Mane, Other.
• Vitaminina & Mineraly: Vitaminina B, Vitamina C & E, Ny hafa.
• Molecules voajanahary: Acetyl-L-Carnitine, Alpha GPC, Citicoline, Docosahexaenoic Acid (DHA), Others Consumables & Disposables.
• Amin'ny fampiharana: Fanatsarana ny fitadidiana, toe-po & fahaketrahana, fifantohana & fifantohana, faharetana & fanoherana ny fahanterana, torimaso & fahasitranana, ary fanahiana.
• Amin'ny endrika fanampin-javatra: Tablets, Capsules, hafa.
• Amin'ny Vondrona Taona Mpampiasa Vondrona: Geriatria, Olon-dehibe ary Pediatrics.
• Amin'ny alalan'ny fantsona fizarana: Geriatric, olon-dehibe, ary ankizy.
Tsena Fanampiana ara-pahasalamana ho an'ny ati-doha maneran-tany, araka ny faritra:
• Amerika Avaratra
o Araka ny firenena:
- Eoropeana sisa
• Azia Pasifika
- Korea Atsimo
- Ny sisa amin'ny Azia Pasifika
- Ny ambin'ny Amerika Latina
• Afovoany Atsinanana & Afrika
- Firenena GCC
- Afrika Atsimo
- Afovoany Atsinanana & Afrika sisa